Macroplastic Waste and Microplastic Waste
The majority of plastic debris that contributes to our environment are microplastic and macroplastic.
Plastic waste that we generate can end up in many oceans, land, and with the exposure of wind, water, and sun they can be damaged and explode into small parts. Those small parts are defined as macroplastic waste. Likewise, those microplastic waste can also gradually become smaller into microplastic waste. Macro plastic waste is generally larger than the size of 20 mm, and the size of microplastic is between2mm to5mm.
Those microplastic waste and macro plastic waste are becoming the major issues for the marine creatures and habitats. They often mistake microplastic and macro plastic waste as food which can lead them to indigestion. It is sad indeed to see dying marine animals because of plastic pollution. ‘
So? What can we do? One thing we can not do is stop drinking water and stop eating food, yet we can reduce the amount of plastic waste that we generateaday, we can reuse it, and we can recycle it one way or either way.
Burmese Version xxxxxxxxxxxxxxx
Macroplastic စွန့်ပစ်အပျက်အစီး နှင့် Microplastic စွန့်ပစ်အပျက်အစီး
ကျွန်ုပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စွန့်ပစ် ပလတ်စတစ် အမျိုးအစားတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Macro plastics နဲ့ Micro plastic ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
လမ်းမပေါ် ၊ ရေပေါ် ၊ မြောင်းတွေပေါ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေဟာ လေထု၊ ရေထု နှင့် နေပူရှိန်ကြောင်း တစ်စစီ ပြိုကွဲပျက်စီး သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားတဲ့ ပလတ်စတစ်အပိုင်းအစတွေကို Macro plastic လို့ခေါ်ပြီး အရွယ်အစားအားဖြင့် ၂၀ မီလီမီတာထက်ကြီးပါတယ်။ Macro plastic မှ ရာသီဉတုဒဏ်ကြောင့် တဖြည်းဖြည်းသေးသွားတဲ့ ပလတ်စတစ်တွေကို Microplastic လို့ခေါ်ပြီးအရွယ်အစားအားဖြင့် ၂ မီလီ မီတာမှ ၅ မီလီ မီတာ အထိရှိကြပါတယ်။
Microplastic နဲ့ Macro plastic အပျက်အစီး တွေက ရေနေ ၊ ကုန်းနေတိရိစ္ဆာန်များအတွက် အဓိကအန္တရယ်ပြဿနာများ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကုန်းနေ၊ ရေနေတိရိစ္ဆာန်တွေဟာ Microplastic နဲ့ Macroplastic အပျက်အစီးတွေကို အစားအသောက်လို့ ထင်မှတ်ပြီး စားမိသောကြောင့် အစားအသောက်ချေဖျက်ရေးစနစ်တွေကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုးအရွားဆုံးက အသက်ပါ ဆုံးရှုံးသွားကြရတယ်။ အဲ့လို့ ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုတွေကြောင်း ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကုန်းနေ ၊ ရေနေ တိရိစ္ဆာန်များ သေဆုံးရတာကို မြင်ရတာ ဝမ်းနည်းစရာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဥ် သောက်သုံးတဲ့ရေ ၊ စားတဲ့ပင်လယ်စာ ငါး ၊ ပုစွန် စတဲ့ အစားအသောက်တွေမှာလည်း Macro plastic နဲ့ Microplastic ဓာတ်အရောအနှောများ မပါဝင်နိုင်ဘူး ဆိုတာ ပြောလို့မရပါဘူး။
ဆိုတော့ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတက်နိုင်လဲ ဆိုတာတော့ စဉ်းစားစရာပါ။ သောက်နေကျရေ ၊ ပင်လယ်စာတွေ မစားသောက်ဖို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ မတက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ မလိုအပ်ပဲ ပလတ်စတစ် သုံးတာတွေ လျှော့ချမယ် သုံးပြီးသား ပလတ်စတစ်တွေလည်း ဒီတိုင်းမစွန့်ပစ်ပဲ ပြန်လည်အသုံးပြုမယ် ဆိုရင် အနည်းနဲ့အများ နောင်ကာလတွေမှာ ဒီကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ချေ မရှိပါဘူး။